အရက်စွဲခြင်းအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အရက်စွဲခြင်းအကြောင်း
Posted by Shwe Ei on Apr 26, 2013 in Health & Fitness, Society & Lifestyle | 21 comments
အမေရိကမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၂ယောက် အနက် ၁ယောက်က အရက်ရဲ့ကျေးကျွန် သို့မဟုတ် အရက်မသောက်ရ မနေနိုင်တဲ့ ရောဂါစွဲကပ်နေကြပါတယ်တဲ့။
အရက်သောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပြသနာရှိနေခဲ့ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုများ ပြောပြနိုင်မှာတဲ့လဲ ?
အဖြေက ရှင်ထင်တာထက် ပိုပြီးရိုးရှင်းကောင်းရိုးရှင်းပါလိမ့်မယ်
လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ရှင့်မှာ ဒီအတွက် မေးခွန်းမေးဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ပြသနာရှိနေပြီဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးဘဲထွက်မှာပါ။ အကယ်ရွေ့ ရှင့်ဘဝထဲက တခြားလူတွေက ရှင့်ကို ပြသနာရှိနေပြီလို့ပြောလာခဲ့ရင်လဲ ဒါဟာ တကယ့်ပြသနာပါဘဲ။ ရှင့်အနေနဲ့ ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို သိလျက်နဲ့ ဆက်သောက်နေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကြီးမားတဲ့ပြသနာရပ်တခုအတွက် အညွှန်းကိန်းဖော်ဆောင်မိတာမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကို တွေ့ကြုံခံစားဖူးသူ အများစုကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဘဲ အရက်ဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ အရက်သောက်ရာကနေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အရှက်ရစရာ သို့မဟုတ် သီးသန့်ပိုဆန်တဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှုတခုခုကြောင့် နောက်တနေ့ မနက်မိုးလင်းလို့ အိ်ပ်ယာနိုးတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ‘နောက်ဒါမျိုး လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့’ ရေရွတ်လိုက်ပြီး နောက်ဘယ်တော့မှ အရက်မသောက်ဖြစ်ဘဲ ကိစ္စပြတ်သွားတာမျိုးပါ။ ဘာပြသနာမှလဲ မတက်လိုက်ပါဘူး။
ရှင့်မှာသာ အဲဒီလို ပြသနာမျိုးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်—ငါဘယ်တော့မှ မသောက်တော့ဘူး ဒါမှမဟုတ် ငါဒီလောက်မူးအောင် မသောက်တော့ဘူးလို့ရေရွတ်ကြည့်လိုက်ပါ—-ဒါပေမဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက် ရှင်ကိုယ်တိုင် ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးလို့ ကျိန်ဆိုထားတဲ့ ကိစ္စကိုဘဲ ထပ်လုပ်မိနေတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် ရှင်ဟာ အနည်းဆုံးတော့ အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်အဆင့် အဆိုးဆုံးအဖြစ် အရက်စွဲခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။
အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြရရင် အရက်ကို အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင် သောက်သုံးခြင်း တနည်းအားဖြင့် အရက်စွဲခြင်းပြသနာ လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရှင့်အနေနဲ့ အရက်မသောက်ရ မနေနို်င်ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဖူးဆိုတာက မေးခွန်းတခု၊ နောက်တခုက ရှင့်ကိုရှင် အရက်စွဲသူတယောက်လို့ ယုံကြည်နေပြီလား ဒါကနောက်တဆင့်မှမေးရမယ့်မေးခွန်း။
ရှင့်မှာ အရက်စွဲခြင်းပြသနာရှိနေပြီလို့ထင်လာရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ စကားပြောပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူတာ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်တာမျိုးတွေ လုပ်သင့်တယ်။ အွန်လိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်တာမျိုး လုပ်နိုင်တဲ့ တကိုယ်ရေ ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေက ရှင့်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတယောက်လိုတော့ ဆေးကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်မျိုး ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဖူး။
အွန်လိုင်းမှာ ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ တချို့ အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပါ
Alchol Abuse Screening Quiz
မေးခွန်း အခု၂ဝလောက် ဖြေလိုက်ရုံနဲ့ ရှင်အရက်သောက်နေတဲ့ ပုံစံက အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား၊ စွန့်စားခန်းဝင်သလိုဖြစ်နေပြီလား၊ အန္တရာယ်ရှိနေပြီလား ဆိုတာကို သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ အမေး အဖြေအားလုံး ပေါက်ကြားမှာလဲ မဟုတ်သလို ဘယ်သူမှလဲမသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာလဲရှိမှာမဟုတ်ဘဲ ရှင့်တယောက်ထဲအတွက် သီးသန့်ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဆန်တဲ့ မေးခွန်းတွေမေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
AA’s 12 Questions
ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဖူး ၂မျိုးဘဲဖြေရတဲ့ မေးခွန်း ၁၂ခု ကတော့ A.A. နဲ့ရှင့်အခြေနေကို ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှင့်မှာ အရက်စွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြသနာအကြီးကြီး ရှိနေပြီဆိုရင်လည်း မချွင်းမချန်ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်အသင်းက ဖန်တီးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းလေးခုကတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ လူနာရဲ့ အရက်သောက်သုံးမှုပမာဏအပေါ် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ဖို့ လိုမလို လျင်လျင်မြန်မြန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရက်စွဲခြင်းပြသနာတွေကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ပေးမဲ့ အခြားသော စမ်းသပ်ချက်တွေကတော့ MAST, the AUDIT, the FAST စတာတွေ အပြင် မြောက်မြားစွာရှိနေပါသေးတယ်။
ရှင့်မှာသာ အရက်စွဲခြင်းပြသနာကြုံတွေ့နေရပြီး အဲဒီအတွက် တခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာလောက်ကြီးတဲ့ အကူအညီတွေ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရှင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြံပြု စောင့်ရှောက်နေသူဆီ အရင်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီး ရှင် ဘယ်လောက်ပမာဏထိ အရက်သောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ရုတ်တရက် အရက်ဖြတ်ခြင်းဟာ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခံစားရစေမှာဖြစ်ပြီး သိပ်မသိသာတဲ့အခြေအနေကနေ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တာမျိုးထိ ကြုံနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ ?
ကျုပ်သိတဲ့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်နည်းကတော့…..
ကွာလတီကောင်းတဲ့ နည်းနည်းဈေးကောင်းပေရတဲ့ အရက်ကိုပဲသောက်ပါ။
မသောက်ခင်မှာဖြစ်စေ သောက်ပြီးလျှင်ဖြစ်စေ အစာစားပါ။
အရက်ကို ဆိုဒါ၊ ကုဒ် သို့မဟုက် ရေများများရေားပြီး သောက်ပါ။
အယက်စွဲဒယ်ဆိုဒါ ဘာရဲ ….
အယက် ကတော့ဗျာ …
ကျိုက်သူတွေ အတွက် ကောင်းဒယ် …
မကျိုက်သူတွေ အတွက် မကောင်းဝူး …
ကျိုက်သူတွေ စွဲတတ်တယ် …
မကျိုက်သူတွေ မစွဲတတ်ဘူး …
ဒီဒေါ့ အယက် မစွဲအောင် အယက် မကျိုက်ဘူးလို့
တစ်နေ့ သုံးဂျိမ် ဖင်ထောင်ပီး အော်ပေးလိုက်ဘာ …
( အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ ? )
ကျွန်တော်တစ်ခါက အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့် ဆိုပြီးတော့ အရက်ကို ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့်ကနေ အန္တရာယ်ကင်းသောက်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေထဲ့ရေးထားဖြစ်ပါတယ်။
( http://myanmargazette.net/148138/health-fitness/food-drink )
အယက်စွဲဒယ်ဆိုဒါ ဘာရဲ ….ဟီးဟီး(ငိုသံ)
ဒို့ကတော့ အယက်မစွဲပါဘူး…အယက်က ဒို့ကိုစွဲနေဒါ..
မိမိကိုယ်မိမိအရက်မစွဲသေးဟုယုံကြည်နေသရွေ့(အရက်မသောက်ရ မနေနိုင် တာမျိုးမဖြစ်သရွေ့)
ငါ အရက်သမား မဟုတ်သေးဟု မှတ်ယူနိုင်ဘာဂျောင်း :harr:
အရက်သောက်လို့ဂန့်ဂန့်သွားတဲ့လူတွေအထဲမှာလူလတ်ပိုင်းတော် တော်များများမြင်နေရပါတယ်။ အများစုကတော့ပြည်တွင်းဖြစ်BEကိုစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်တဲ့လူကအများစုပါ။ အနော့်ပါတ်ဝန်ကျင်မှာတွေ့တာပြောတာပါ။ ၂ဝ လောက်ကစသောက်သူတွေ ၃ဝ ဝန်ကျင်မှာဂန့်သွားတာမျိုးလဲတွေ့ရ ။ကြားရပါတယ်။တချို့ပြောကြတာက အရက်ကပုံမှန်မဟုတ်တာလို့ဆိုကြပါတယ် ။စက်ရုံကအဆင့်ရှိရှိမထုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒီတော့အရက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်ရင် မတော်လို့အရက်စွဲရင်တောင်နဲနဲသက်သာမယ်ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လောက်ကဆုံးသွားတဲ့အဘက အသက်၈၀။ အရက်စသောက်တာသူ့အသက်၂၅။န်ကျင်လောက်ကလို့ သူရဲ့ဇနီးအဖွားကပြောပါတယ်။ အရက်သမားသက်တမ်း၅၅နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာ။
စွဲတာကတော့.. အရက်မှမဟုတ်.. ဝိပဿနာလည်း. စွဲနေရင်မကောင်း…
သကြီး ပြောတဲ့စကားကို ဒီအတိုင်း ထောက်ခံရတာ အားမရလို့
comment ဖြင့်ပါ ထောက်ခံပါ၏……………..
စွဲတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဝိပဿနာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဝိပဿနာဆိုတာ အစွဲလွတ်တဲ့ တရားသာဖြစ်ပါတယ်။
ဝိပဿနာစွဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုး မမြင်ဖူး၊ မကြားဖူးပါ။ :buu:
အမ်အိုင်တီရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်တခုမှာ.. လူသားကတရားထိုင်ရင်.. ကမ်မစ်ကယ်ဓါတ်တမျိုးထွက်တယ်..
တရားကိုစွဲမြဲပြီး… ၃နာရီလောက်ထိုင်ကြည့်.. အဲဒီအရသာစွဲပြီးထပ်ခါလိုချင်နေမိလိမ့်မယ်..။
ထွက်လေဝင်လေမှတ်တာမှာ.. နည်းမကျရင်.. ဦးနှောက်ထဲအောက်စီဂျင်ရောက်နှုန်းမမှန်ဖြစ်ပြီး.. အောက်စီဂျင်ငတ်တဲ့ဦးနှောက်က.. ဂဂျိုးဂဂျောင်တွေထုတ်ပေးတတ်တယ်တဲ့..
တရားအတိုင်မတတ်လို့.. ရုးကြောင်တာတွေလုပ်တာ မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်..
အမှတ်မမှားရင်.. ယူကျုထဲ..ဆရာတော်တပါးလုပ်တဲ့တရားစခန်းမှာ.. တရားထိုင်နေတဲ့သူတွေ.. မြွေလိုလူလှိမ့်သွားပြတာဖြစ်.. နတ်ပူးသလိုတုန်.. စတာတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီတွေရဲ့.. ဗီဒီယိုတက်ဖူးတယ်..
အဲဒါဝိပသနာဟုတ်ဘူးလေ သူကြီး အဲလိုသာယာသွားရင် သမထလို့မှတ်သားဖူးတယ်
ဝိပဿနာကိုလည်းပဲ စွဲတာ ရှိပါတယ်။ တရားကို မဂ်အစစ် ကျတဲ့အဆင့်အထိမရောက်ပဲ နဲ ့မဂ် အတုမှာပဲ သာယာနေရင်လည်း ဒါက တရားကိုစွဲ တယ်လို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို ့ရိပ်သာတွေမှာ ရိပ်သာဝင်နေရင်းနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေ လုပ်နေရင်းနဲ့
သေသွားတဲ့ယောဂီတွေ မကျွတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ဒါမျိုးကိုလည်း တရားကိုစွဲတယ် လို ့ခေါ် လို့ရပါတယ်။ (ဆရာကြီးဝင်လုပ်တာမဟုတ်ပါ သိသလောက်၊ မှတ်သလောက်လေးကို ပြန်ပြောပြရုံပါ။)
စွဲတယ် …။ စွဲလမ်းတယ် တစ်နည်းပြောရရင် သာယာတယ်ပေါ့ဗျာ …။ တဏှာဖြစ်တယ်ပေါ့ ….။ မူးချင်တာကို …..။ သူကြီးပြောသလို ဝိပဿနာကလည်း တဏှာဖြစ်ရင် စွဲတာပဲ ….။ တဏှာဆိုတာ လုပ်ချင်တယ် ကိုင်ချင်တယ် ပြောချင်တယ် ဆိုချင်တယ် ထိုင်ချင်တယ် သောက်ချင်တယ် …. စတဲ့………..ချင်တယ်လို့ ဖြစ်လာရင်တဏှာပဲလေ……..။ အရက်အပေါ်မှာဖြစ်တာကတော့ သောက်ပြီး ရီဝေဝေနဲ့ လူတစ်ကာကိုကြည့်ရတာ သဘောကျတာ …..။ ရီဝေဝေလေးနဲ့ အာလေးလျှာလေး နဲ့ စကားပြောရတာကိုသဘောကျနေတာ …..။ အဲဒိလိုလေးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားရတာကိုနှစ်ခြိုက်နေကြတာ အဲဒိကနေ အရက်သောက်တဲ့ ကဏ္ဍကိုအစပြုလာကြတာပဲ….။ အဲဒိတော့ အန္တာရာယ်ရှိတဲ့ အရက်သောက်ခြင်း မသောက်ခြင်းက အရက်အမျိုးအစားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး….။ အရက်ကို ခံနိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်ပြီးသောက်သုံးတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် များခြင်းနဲ့သွားပြိးဆိုင်နေပါတယ်…..။ တစ်လအတွင်းမှာ အရက်မူးပြီးအိပ်ပျော်ရာကနိုးလာချိန်မှာ မအိပ်ပျော်ခင်ကအကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လောက်ထိမှတ်မိသလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာရင် ရနိုင်ပါတယ်….။ ကျနော် အရက်ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်ခဲတုန်းကဆိုရင် တစ်လမှာ ဆယ့်ငါးရက်လောက်က မမှတ်မိတာများတယ် …..။ အရက်သမား အခေါ်ကတော့ လွတ်သွားတယ်ပေါ့…..။ အဲဒိလို လွတ်သွားအောင် သောက်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်များလာပြီဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိလာပါပြီ ….။ ဘယ်လိုအရက်မျိုးကိုပဲသောက်နေသောက်နေပါ…။ ဒါဟာမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါ….။ အရက်စွဲတယ်မစွဲဘူးဆိုတာကလည်း အရက်သောက်သူရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်….။ နေစဉ်ပုံမှန်သောက်နေရင်းက တစ်ရက်နှစ်ရက် သုံးရက် အဲဒိလိုမျိုး ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲ ရပ်ကြည့်ပါ….။ ဘယ်လိုနေသလဲ ….။ လက်တုန်သလား လေပျိ်ု့ အန်သလား ညအိပ်ပျော်သလား စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်….။ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ စွဲတယ်လို့ပြောလို့မရသလို တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် စွဲနေပြီလိုပဲ တစ်ထစ်ချမှတ်ထားလိုက်ပေရော့….။ ကိုယ်ခန္ဓာက အရက်ကိုတောင်းလာလို့ဖြစ်တာပါ…။ လက်တုန်လာတာတို့ ချွေးစေးတွေပြန်လာတာတို့ လေတွေ ပျို့အန်လာတာတို့ ညအိပ်မပျော်ဖြစ်လာတာတို့ကိုပြောတာပါ……။ နေဝန်းနီတို့တုန်းကတော့ တစ်လကို သုံးလေးရက် မသောက်ပဲနေကြည့်ဖူးတယ်….။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ပတ်လောက်နေတယ်….။ နေလို့ရတယ်အခါ ပြတ်လက်စနဲ့ ဆက်ပြီးမသောက်ပဲနေဖို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဖူးပါရဲ့….။ ဒါပေမဲ့ အရက်သမားဘဝကို ခုံမင်နေတာ ဆိုတော့ အဲဒိလိုစကားပြောတဲ့သူကိုဝေးဝေးရှောင်နေတာ ….။ နေဝန်းနီက ဘာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ အရက်လေးထွေထွေနဲ့ အာလေးလျှာလေးနဲ့ ဆဲရတာကိုကြိုက်တာ အရက်သောက်မထားမိတဲ့ အရက်စမ်းသပ်ဖြတ်ထားမိတဲ့နေ့မျိုး ဆဲစရာပေါ်လာလို့ကတော့ ဟင်းးး ငါအရက်သောက်မထားမိတာမှားလေခြင်းဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာရော………။ ဒါနဲ့ပဲ မဆုံးတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကာလအတန်ကြာအောင် ရွတ်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်
အယက်သမား သမဂ္ဂ အသင်းဝင်တိုးတယ်လို့ မှတ်လိုက်ရမလား ခညာ
အန္တာရယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားသဗျို ့…..
တချို ့ကလည်း ဘီယာသောက်တာ အန္တာရယ် ကင်းတယ်လို ့ပြောသလို….
တချို ့ကလည်း အရက်ပြင်း တပက် ပုံမှန်သောက်တာမှ သာ ကျန်းမာရေးညီညွတ်ပီး သွေးလေ ညီညွတ်သတဲ့…..
ကျုပ်အနေနဲ ့က တော့ လူဆိုတာ ရေ လေ မြေ မီး တွေနဲ့အညီမျှ ပေါင်းစပ်ထားလေတော့……..
အရက်လို အရက်သောက်…. ဆေးလိပ်လို ဆေးလိပ်သောက်….
အစွဲလည်းမရှိဖူး….. အမြဲလည်း မရှိဖူး…. လုံးလုံး မလုပ်တာဆိုလို့ကွမ်းပဲ ရှိသဗျ……..
အချိုလို အချိုစား အငန်လို အငန်စား…..
မှတ်ရသလောက် လူပါးစပ်ဟာ အရာပေါင်းစုံးကို ဝါးလို ့ရသဗျ…..
အသီးအရွက်လည်း ရသလို မာမာထန်ထန်တွေလည်း ရသဗျ………
အမျှင် ပါတာတွေလည်း ရသလို ချောတိချွဲရာ တွေလည်း ရသဗျ……
ဆိုတော့ ကား ဒီအစုံစား ပါးစပ်ကြီးနဲ ့…. အစုံ ပေါင်း ကိုယ် ကြီးနဲ့ပိုင်ဆိုင်သော လူသည်….
အစုံ တီးမည် ဖြစ်သောကြောင့်….. အရက်သည် လုံးဝ မသောက်သင့်သော အရာမဟုတ်……..
စွဲခြင်း သည် ပြသာနာဖြစ်ကြောင်း……
ထို သို့ဖြစ်ရသော နောက် အကြောင်း အရင်း တခုမှာလည်း ပြည်ပ အရက် ဈေးကွက်တော့ သိဖူးရယ်…..
ပြည်တွင်း မှာတော့ ဘီယာ ဈေးကွက် သည် ပြည်ပ နဲ့နှိုင်းယှဉ်သော အလွန် ဈေးပေါသတဲ့…….
တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဘီယာတခွက် ၆ ယူရို ရ ယူရို ပေးရတဲ့ အချိန်မှာ…..
ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ၅၀ဝ ၆၀၀…. ကြားဖူးသလောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာ တရုတ်ကလာတဲ့ ဘီယာပုလင်းတွေ ရှိသတဲ့ တစ်ပုလင်း မှ ၂၀ဝ ကျသတဲ့….
ဆိုတော့ကား…. အရက်စွဲခြင်းသည် တဦး တယောက် ခြင်းရဲ့ တာဝန် မဟုတ်သလို….
အုပ်ချုပ်သူများရဲ့ တာဝန်လည်း မကင်းကြောင်း…….
အခု လူတွေက ဘီယာ မသောက်လျှင် လူတန်း မစိသလို…..
အရက် မသောက်တက်လျှင် ယောကျာင်္းမဟုတ်သလို……
မိန်းကလေးတွေတောင် အရက်သောက်တာ အပြစ်မဟုတ်သလို ပြောလာကြပေရဲ့…..
သို် ့သော်ကား မိန်းမ ယောကျာင်္း လူတန်း စေ့မစေ့ ယောကျာင်္း ပီသ မပီသ စသဖြင့်ဟာ….
အရက် သောက်နိုင် မသောက်နိုင် အပေါ် မူမတည်ကြောင်း………
အရက် သောက်ခြင်း ကို ရှုံချကြောင်း…. ဒါဟာ ကျန်းမာရေး အရ သာ သောက်သင့်ကြောင်း…
ထိန်း သောက်သင့်ကြောင်းကို စီနီယာ အကိုကြီးများ အမကြီးများမှ သွန်သင် ဆုံးမမှူ အားနည်းနေတဲ့အပြင်….
သောက်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်…..
သောက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်များကိုသာ မသိမသာ ချပြမိနေသလို ဖြစ်နေတာကတော့ ဝမ်းနည်း စရာပါပဲ………
စာလည်း ရှည်တွား ဘီ…..
အရက်သောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ လူတိုင်းမှာ တူညီတဲ့အမြင် မရှိနိုင်ပါဘူး တိမ်မည်းရေ။
ကိုယ်ပိုင် ခံယူချက်အပေါ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်နေဖို့လိုတာပါ။
အရက်သောက်တတ်မှ အပေါင်းအသင်းလုပ်ချင်သူမျိုး ကို အရက်မကြိုက်တတ်တဲ့ကိုယ်က
စီနီယာ့ စီနီယာတွေကို တော့ အပြစ်တင်နေဖို့မရှိပါဘူး…ကိုလဲ စီနီယာတလှည့် ဂျူနီယာ တလှည့်ဖြစ်နေအုံးမှာလေ :hee:
မင်းကိုပဲ စွဲလန်းခဲ့ရ အသက်ရှင်ချိန်လေး။
မမပြာ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး ကို မိန်းက အိမ်မှာကပ်ထားမလို့လုပ်နေဘီ..ဂျာ..။